यात्रुमैत्री सेवा पु¥याउने अभियानमा छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / यात्रुमैत्री सेवा पु¥याउने अभियानमा छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता July 25, 2018	0 626 Views
अध्यक्ष : पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालि
पछिल्लो समयमा सार्वजनिक यातायात से वा सुविधाका लागि नया–नया यातायात प्रालि खुल्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । अहिले दाङमा मात्रै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति, संघ र प्रालि गरी करीव आधा दर्जन बढी पुगिसके का छन् । वर्षे नि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संघ संगठनको संख्या थपिदै गइरहे पनि सर्वसाधारणले यात्रुमै त्री, विश्वसनीय र स्तरीय से वाको अभाव खे प्नु परिरहे को छ । सार्वजनिक यातायात क्षे त्रभित्रका समस्या र चुनौ ती, सर्वसाधारणले भो ग्नु परे का समस् याबारे युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालि दाङका अध्यक्ष सरो ज शाह सग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिका हालका गतिविधिहरु के छन् ?
पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिले यात्रुहरुलाई निश्चित गन्तव्यसम्म कसरी सुरक्षित पु¥याउन सकिन्छ भन्ने बारे बढी ध्यान के न्द्रित गरी काम गरिरहे को छ । वर्षातको समय रहे काले बाढीले कतै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ कि भन्ने चकचकी छ । त्यही अनुरुपको गतिविधि हामीले दै निक चलाइरहे का छौ ं सुरक्षितरुपमा निश्चित गन्तव्यसम्म यात्रुलाई पु¥याउने  । अर्काे कुरा प्रालिले से वा साविक राप्तीका पा“च जिल्ला र भे रीको बा“के मा नियमित सञ्चालन गरिहे को छ । बा“की प्रदे शको छ जिल्ला अझै बा“की छन् से वा सञ्चालन गर्न । अब त्यसतर्फ पनि प्रालिको से वा विस् तार गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहे को छ ।
यात्रुहरुको आकर्षण कस्तो छ नि ?
पाण्डवे श्वरी पश्चिम ने पालकै फरक सो च र से वा सुविधाको लक्ष बो की सञ्चालन भएको हो  । थो रै लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने  । जसले व्यावसायिक व्यक्ति र से वाग्राहीहरु दुबै लाई नाफा दिलाउने परिकल्पनाले साना सवारी साधनबाट से वा सञ्चालन शुरु गरे का हौ ं । दाङमा भन्नु हुन्छ भने खुल्ने र सञ्चालन हुने यातायात व्यवसाय ठूला सवारी साधनका मात्रै भए । आकस् िमकरुपमा को ही कतै बिरामी परे टाढा लै जानुप¥यो भने सर्वसाधारणले मंहगो मा सवारीसाधन लै जानुपर्ने वा कुनै ठाउ जानुप¥यो भने ठूला सवारीहरु मान्छे भरे र मात्रै जाने त्यो पनि बाटामा लो कल गर्दै जाने  । जसले भने को समयमा यात्रु निश्चित गन्तव्यमा ढिला पुग्ने  । अहिले चारै तिर जानलाई कालो नम्बर प्ले टका हाम्रा गाडी नम्बरमा लागे का हुन्छन् । थो रै यात्रु चाहिन्छ । चाडै भरिन्छ । ठूला सवारी साधनमा तिर्नुपर्ने भाडा तिर्छन । निश्चित सिट हुन्छ । भरिन्छ जान्छ । भन्नाले से वामा छिटो छरितो भएकाले यात्रुहरु खो जी–खो जी पाण्डवे श्वरीकै गाडीमा चढ्ने गर्दछन् ।
यात्रुहरुको आकर्षण राम्रै छ भन्नुभयो , व्यवसायीहरुको कस्तो छ नि ? अन्य व्यवसायी, प्रालि र समितिभन्दा गाडी थो रै छन् नि ?
यात्रुहरुको मात्रै हो इन व्यवसायीहरुको पनि आकर्षण राम्रै छ । किनकि मै ले अघि पनि भनिसके ं थो रै लगानीमा से वा सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीले सञ्चालन गरे को व्यवसायमा एकजना चालक मात्रै राखे पुग्छ । सहचालकहरुको आवश्यकता पर्दै न । हाम्रा सवारी साधन साना रहे काले थो रै यात्रुहरु चढ्छन । तर दै निक आर्थिक संकलन पनि कम हुन्छ । तर मुनाफाको हिसाब राम्रै छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय व्यवसायीहरु पनि हामीतिर बढी आकर्षित भइरहे का छन् । अकोर् कुरा हामीले तीनवटा सवारी साधनबाट व्यवसाय सञ्चालन गरे का हौ ं । अहिले करीव सयवटा सवारी साधन हामीमा आबद्ध छन् । जसले गर्दा व्यवसायीहरु पनि हामीप्रति आकर्षित बन्दै गइरहे को पुष्टि गर्छ ।
अन्य प्रालि र समितिभन्दा पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिमा के फरक छ ?
अन्य भन्दा हामी धे रै फरक छौ ं । अन्यले नाफाको व्यवसाय गरिरहे का छन् । तर हामी नाफामुखी रहे पनि से वामुखी व्यवसायीका रुपमा सञ्चालन भइरहे का छौ ं । दाङबाट विभिन्न जिल्लाका तीर्थस् थलमा से वा सञ्चालन गर्ने काम अहिले सम्म कुनै व्यावसायिक समिति वा प्रालिहरुले गरे का थिएनन् जो हामीले पहिलो पटक ग¥यौ ं । अनि अर्काे फरक के छ भने समयको परितर्वनस“गै समाजमा विभिन्न विकृतिहरु दे खा परिहे का छन् । जस् तो लुटपाट, चो री, अपरहणजस् ता अपराधहरु बढ्दै गइरहे का छन् । त्यो जो खिमबाट यात्रुहरुलाई जो गाउन हामीले यात्रुहरुलाई घरमै लिन जाने र घरमै छो ड्न जाने से वा सुविधा दिएको छौ ं । यो हाम्रो नमूनायो ग्य काम हो  । अकोर् फरक मै ले भन्नै पर्छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरु फो हो र हुने , यात्रुमै त्री व्यवहार नपाउने , धे रै सवारी साधन हुनाले कुन गाडीमा
कतिजना यात्रुहरु चढे का छन् त्यसको पनि ले खाजो खा नहुने , सवारीसाधन ठूला हुने भएकाले सिट क्षमताभन्दा बढी बो क्ने गर्दछन् । जसले अन्य यात्रुहरुलाई असजिलो पार्दछ तर हामीकहा“ फिक्स सिट, फिक्स यात्रुहरु बो क्ने गर्दछौ ं । जसले यात्रुहरुलाई फरक से वा र सुविधाको महसुस गराउन सके को छ । अर्काे कुरा हामीले यात्रुहरुका लागि सवारी साधनको संख्यामा भन्दा पनि से वा र सुविधामा प्रतिस् पर्धा गरिरहे का छौ ं । धे रै गाडी हुने ले धे रै यात्रु बो क्लान् तर यात्रुको सुरक्षा र सहज से वा दिन सक्दै नन् । हामीले सर्वसुलभ, स् तरीय से वा र सुविधा दिने , यात्रुमै त्री सुरक्षित से वा दिन सक्छौ ं । जसले गर्दा यात्रुहरुको विश्वसनीयता र भरो सा बढ्दै गइरहे को छ ।
साना सवारी साधनहरुबाट व्यवस् िथत र सुरक्षित से वा दिन्छौ ं भन्नुभयो  । तर यही सेवा राता नम्बर प्ले टका साना सवारी साधनहरुमा पनि पाइन्छ नि ?
राज्यले रातो नम्बर प्ले ट व्यक्तिगत प्रयो जनका लागि दिएको हुन्छ । ती सवारी साधनले सार्वजनिक यात्रुहरु ओ सारपो सार गर्छन भने त्यो गै रकानुनी हो  । तर यो समस् या निकै टड्कारो हो  । गै रकानुनी हिसावले आम्दानी गर्ने र राज्यलाई राजस् व छलि गर्दै धे रै ले व्यक्तिगत सवारी साधनलाई सार्वजनिक यात्रु बो क्नमा
प्रयो ग गरिरहे का छन तर राज्यले ती रातो नम्बर प्ले टका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यात्रु बो क्नमा निषे ध गर्न सके को छै न । जसका कारण राज्यबाटै स् वीकृति प्राप्त गरी साना सवारी साधनसहितको सुरक्षित कानुनी अधिकार पाएका हामी अन्यायमा परे का छौ ं । से वा रातो प्ले टका सवारी साधनले दिन्छन तर सुरक्षा दिन सक्दै नन् । हामीलाई राज्यले सार्वजनिक यात्रु बो क भने र मान्यता दिएको छ । हामीले दुर्घटना बिमा र अन्य भइपरिआउने जो खिमहरु सहजै समाधान गर्न सक्छौ ं । तर रातो प्ले टका सवासी साधनमा त्यो सुरक्षा ह“ुदै न । रातो प्ले टका गाडी कालो नम्बर प्ले टका गाडी कालागि चुनौ तीका रुपमा दे खिएकाले राज्यले उनीहरु लाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारे न्टी र राजस् व असुलीमा ध्यान दिनुपर्छ  । जथाभावीरुपमा गुड्ने रातो नं. प्ले ट भएका गाडीले यात्रु र राज्य दुबै लाई जो खिममा पार्ने भएकाले त्यसतर्फ सबै सजग बन्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात से वाको बिमा प्रक्रिया अलि झञ्झटिलो हुन्छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । तपाइहरुको के छ ?
सार्वजनिक यातायात से वा क्षे त्रको सबै भन्दा चुनौ तीपूर्ण विषय भने को नै बिण्मा हो  । राज्यले बिमाको निश्चित मापदण्ड तो के काले यस् तो समस् या दे खिएको हो  । अब राज्यले बिमाको वर्गीकरण गरी बच्चा, बृद्ध युवा, सर्वसाधरण किसान, वकिल, इञ्जिनियर, उमे र हद र पे शागत हद छुट्याइ बिमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
अर्काे कुरा के छ भने कुनै एकजना किसान छ । तर उसको परिवार उसमाथि नै आश्रित छ । तर उसको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गयो भने उसलाई कति विमा रकम दिने वा एक जना बृद्ध छ । उसको पनि दुर्घटनामा ज्यान गयो अब उसलाई कति दिने  । यसलाई छुट्याउन अति जरुरी छ । विमारकम सबै लाई समान भएकाले यस्तो समस् या दे खिएको हो  । अर्काे समस्या के हो भने यात्रु र व्यवसायीबीचको अन्तरविरो धले नै यस् तो समस्या पै दा गरे को छ । कुनै यात्रुलाई सामान्य चो ट लागे मा उसले स् थानीयस् तरमै औ षधी उपचार गराउन मान्दै न । अझ मृत्यु नै भयो भने राज्यले निश्चित दायरा तो के को छ । तर त्यो दायरालाई सहजै स् वीकार गर्न नसक्दा यस् तो समस् या आएको हो  । तर हामीमा अहिले सम्म बिमाको समस् या दे खिएको छै न । तर समस् या नआउने गरी प्रालिले काम गरिरहे को छ ।
प्रालिको से वा शहरमा मात्रै छ कि गाउमा पनि ?
ने पालको भू–बनो ट प्रायः पहाडै पहाडको छ । जहा ठूला सवारी साधन चल्न सक्दै नन् । सानो सवारी साधन सहजै चल्न सक्छने  । हामीले साना सवारी साधनको से वा सञ्चालन गरिरहे के ा छौ ं । प्रायः हाम्रो से वा शहरमा भन्दा पनि गाउमा के न्द्रित छ । अहिले हामी रुकुम, रो ल्पाजस्ता दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउ मा यातायात से वा सञ्चालन गरिरहे का छौ ं । हामी शहरभन्दा गाउ“मा र सुगम भन्दा दुर्गममा बढी से वा सञ्चालन गरिरहे का छौ ं ।
प्रालिको आगामी लक्ष के छ ?
छो टो समयमा हामी यात्रुहरुको भरो शा र सारिथ बनिसके का छौ ं । राप्ती र भे री मात्रै हो इन आगामी दिनमा ने पालभर नै से वा सञ्चालन गर्न सो च बनाएका छौ ं । हाम्रो अबको लक्ष उद्दे श्य भने कै सर्वसुल, छिटो छरितो से वा दिने हो  । अबको के ही समयमै प्रदे श नंं. पा चका १२ जिल्लभर नै एकै साथ से वा सञ्चालन गरी सबै गाउ“वस् ती र शहर बजारमा स्तरीय यातायात से वाको पहु“च पु¥याउनु हो  । त्यसमा राज्य, यात्रु सबै को हाते मालो को आवश्यकता पर्दछ जो प्रालिको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव छै न ।
हामीले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्दे श्यले प्रालिमा व्यवसाय सञ्चालन गरे के ा छौ ं । तर यो मुनाफाको आर्जन गर्ने व्यवसाय मात्रै नभई से वामूलक व्यवसाय रहे काले राज्यले राजस् व छुट र प्रो त्साहनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसाय आफै मा जो खिमपूर्ण रहे काले गै र कानुनीरुपमा सञ्चालन हुने रातो प्ले टका सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
Previous: जग्गा कारोवारीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ
Next: प्रेम र सौन्दर्यको महिना साउन